यस्तो क्लिनिक जहाँ महिलाको कु’मारीपन फर्काइदिन्छ – Daily NpNews
७ दिनमै कालो अनुहार गोरो, अपनाउनुहोस् निकै सरल यी घरेलु उपाय
माथि बाट अचानक ढुङ्गाबाट निस्कन थाल्यो खु’न, सबै चकित (भिडियो हेर्नुहोस्)
विगत १९ वर्षदेखि आफ्नै सम्धिबाट करणी हुँदै आएकी यी महिला रुँदै आईन् मिडियामा (भिडियोसहित)
दुर्गेश थापा बुवा बन्दा शुभचिन्तक चकित
मुख्य पृष्ठ /रोचक/यस्तो क्लिनिक जहाँ महिलाको कु’मारीपन फर्काइदिन्छ
यस्तो क्लिनिक जहाँ महिलाको कु’मारीपन फर्काइदिन्छ
सेहम हसैनी । ट्युनिसियामा जव केटीहरुको विवाह हुन्छ, तब उनीहरु कु’मारी होउन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । यसै कारणले कु’मारीपनको फेरि हासिल गर्नका लागि ‘हा’इमन’ लगाउने कारोबार त्यहाँ निक्कै फस्टाएको छ ।यास्मिन निक्कै डराएकी छन् । उनले आफ्नो ओठ टोकिरहेकी छन् र लगातार मोबाइल हेरिरहेकी छन् । उनले भनिन्, ‘मैले यसलाई धोकाको रुपमा मान्छु र यसैकारणले निक्कै दुखी छु ।’
ट्युनिशियाको एक प्राइभेट क्लिनिकमा हामी चौथो तल्लामा छौं र यहाँ महिलाको समस्यासँग सम्बन्धित डाक्टर छन् । गुलावी रंगको वेटिङ रुममा महिलाहरु निक्कै धैर्यका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।यास्मिनले मलाई बताएअनुसार उनले नक्कली हा’इमन लगाएकी छन् । एक सामान्य मेडिकल प्रक्रियाको माध्यमबाट महिलाको नीजि अंग क्षेत्रमा एक झिल्लीजस्तो रहने हा’इमन लगाइन्छ, हा’इमनलाई नीजि अंग क्षेत्रमा राख्नाले महिलाको कु’मारीपन पुनः फिर्ता आउने विश्वास गरिन्छ ।
समाजशास्त्री सामिया एलुमीले भनिन्, ‘हामी आधुनिक समाजमा रहेको दाबी गछौं । तर, यो आधुनिकताले महिलाहरुलाई शा’रीरिक सुखप्राप्तिका सम्बन्धमा हुने स्वतन्त्रता देख्दैन ।यास्मिनको दुई महिनापछि बिहे हुँदैछ । २८ वर्षीया यास्मिनलाई एउटै डरले सताइरहेको छ कि उनी कु’मारी छैनन् । भविश्यमा उनको कु’मारीपन तोडिसकेको कुरा पत्ता लाग्न सक्छ । उनले भनिन्, ‘एक दिन अनजानमा म पतिका साथ कुराकानीको क्रममा यो नहोस् कि म धोका खाउँ वा मेरा पतिको सन्देश होस् ।’ट्युनिशियामा थुप्रै यस्ता खवर आइसकेको छ कि कु’मारीपन नभएको आरोपमा पुरुषहरुले पत्नीलाई विवाहको लगत्तै छोडपत्र दिएका छन् ।
यास्मिनको जन्म एक उदार परिवारमा भएको थियो ।उनले भनिन्, ‘मेरो एक पुरुषका साथ अफेयर थियो । त्यसबेला मैले कल्पना गर्नपनि सक्दिनथेँ कि कु’मारीपनलाई लिएर हाम्रो समाजमा कति दबाव हुन्छ र यसको नतिजा कस्तो हुन्छ । यस्तोमा म अहिले निक्कै डराएको छु । यदि मैले आफ्नो अफेयरको बारेमा मंगेतरलाई भनेँ भने निश्चित छ कि मेरो बिहे टुट्नेछ ।’
त्यसैका लागि हा’इमन लगाउन उनले ४० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न लागेकी छन् । हा’इमन लगाउनका लागि करिव आधा घण्टाको समय लाग्नेछ । उनले थुप्रै महिनादेखि यसैका लागि पैसा बचाइरहेकी थिइन् कि आफ्ना पतिलाई कु’मारीपनका बारेमा सन्देह नहोस् ।यास्मिनलाई पुनः कु’मारी बनाउने प्रक्रिया एक गाइनोक्लोजिस्टले पूरा गर्नेछन् । डाक्टर रशिद एक सातामा दुई यस्ता अपरेसन गर्छन् ।डाक्टर रशिद भन्छन् कि जो हा’इमन पुनः लगाउन आउँछन्, त्यसमध्ये ९९ प्रतिशत केटीहरु हुन्छन्, जसलाई आफ्नो परिवार र आफन्तको इज्जतको डर हुन्छ ।
उनले भने कि यास्मिनजस्ता निक्कै कम केटीहरु हुन्छन् जो यस कुराको लुकाउन चाहन्छन् कि उनीहरु कु’मारी छैनन् ।वास्तविकता के हो भने हा’इमन टुट्नुको एकमात्र कारण शा’रीरिक सुखप्राप्तिको समय भने होइन । तर पनि महिलाहरुलाई गलत तरिकाले दोषी ठहर्‍याइन्छ र उनीहरुमाथि विवाहअघि शा’रीरिक सुखप्राप्ति गरिसकेको आरोप लगाइन्छ ।
डाक्टरले भने, ‘गाइनोक्लोजिस्ट हा’इमन पुनः राख्न सक्छन्, यो कुनै अपवाद होइन । यहाँ धेरैजसो डाक्टर यसो गर्दैनन् । तर म गोप्य रुपमा यसो गर्छु किनभने म ती मानिसहरुसँग सहमत छैन कि जसले कु’मारीपनलाई एक पवित्र कुरा मान्छन् । हामी भन्छौं कि यो पुरुष प्रभूत्व हो र म यसको बिरुद्धमा लड्न जारी राख्नेछु ।’
उत्तरी अफ्रिकामा ट्युनिशिया महिलालाई धेरै अधिकार दिने मुलुकमध्ये पर्छ । तर, धर्म र परम्पराका कारण यहाँ महिलाहरुलाईविहेभन्दा अघि कु’मारी बन्न बाध्य गराउँछ ।ट्युनिशियाको तलाक नियममा यो पनि समावेश छ कि यदि पतिलाई जानकारी हुन्छ कि उनकी पत्नी कु’मारीपन छैन, उनले तलाक दिन सक्नेछन् ।
समाजशास्त्री सामिया एलुमीले भनिन्, ‘ट्युनिशियाको समाज खुल्ला छ तर हामी पा–ख–ण्डी भइरहेका छौं । यहाँ सामाजिक रुढीबाद निक्कै प्रवल रुपमा छ र हामी आधुनिक समाजमा यो सही मान्न सक्दैनौं । महिलाको शा’रीरिक सुखप्राप्तिको इच्छा र उनको स्वतन्त्रताको मामलामा आधुनिकता अझै पनि कोषैं टाढा छ ।’
एक सरकारी विश्वबिद्यालयमा मेरो भेट इसेनसँग भयो । २९ वर्षीय इसेनको विहे गत वर्ष भएको थियो । मैले उनीसँग सोधेँ कि उनी र उनका साथी कु’मारीपनको ख्याल राख्छन् त ? उनले भने कि उनका लागि यो निक्कै अहम् छ ।इसेनले भने, ‘यदि मैले विवाहपछि मेरी श्रीमती कु’मारी छैन भन्ने थाहा पाएँ भने म पुनः उनलाई भरोसा गर्न सक्दिन । म यसलाई घोकाको रुपमा मान्छु । म नक्की हा’इमनमा विश्वास गर्दिन र मेरो मान्यता के हो भने त्यसले काम गर्दैन, जुन काम प्राकृतिक कु’मारीपननले गर्छ ।’
इसेनसँगै रहेका अर्का बिद्यार्थीले भने कि ट्निशियाली परम्परामा महिलाने निक्कै असर झेल्नुपर्छ । उनले भने कि उनका लागि यो पूरै मुर्ख तरिका हो । यदि पुरुषहरु विवाहअघि शा’रीरिक सुखप्राप्ति गर्न सक्छन् भने महिलालाई किन कठघरामा उभ्याइन्छ ? बीबीसीबाट अनुवादित
यी राशि भएका जोडी कहिलै छुट्टिदैनन्, तपाई पनि पर्नुभयो की ?
साथीले बोलाएर गएँ, कोठामा लगेपछि औषधी खुवाएर यस्तो गरे
से:क्स भनेपछि म भुतुक्कै हुन्छु !
मोटो कम्मर स्लीम बनाउन खाना खानुभन्दा १ घण्टा
यी ३ राशिका युवती हुन्छन् सबैभन्दा उत्तम, सुन्दरतामा हुन्छ चुम्बकिय आकर्षण
27 seconds अघि